musha nyika dzakabatana Vatambi veBasketball Russell Westbrook Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Russell Westbrook Biography inokuudza Chokwadi pamusoro peNyaya yeUdiki hwake, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Wife (Nina Earl), Vana (Noa, Skye, naJordyn), Mararamiro, Hupenyu hwePamoyo, uye Net yakakosha.
Namashoko akareruka, tinopa Hupenyu Hupenyu hwaRussell Westbrook. Childhood Biography inotanga nyaya yake kubva pamazuva ekutanga kusvika paanozove anozivikanwa.
Kutangisa kutanga nhoroondo yake yehupenyu, heino NBA Star's cradle-to-rise gallery.
Russell Westbrook Biography - Tarisa Hupenyu hwake hwepakutanga uye Simuka.
Ehe, munhu wese anoziva mutambi webhasiketi akakura anotambira Washington Wizards yeNBA. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveRussell Westbrook's Biography, iyo yatakagadzirira uye inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina imwezve ado, ngatitangei.
Russell Westbrook Childhood Nhau:
For Biography starters, ane zita rezita "Beastbrook". Russell Westbrook akazvarwa pazuva re21st raNovember 1988 kuna amai vake, Shannon Horton, nababa vake, Russell Westbrook Jr., muLong Beach, California, United States.
Mufananidzo wehudiki waRussell Westbrook.
Kuti ajekese, Russell ane munun’una, Raynard. Vose ndivo chete vana vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vavo vakanaka, Shannon naRussell Jr. Vabereki vose (Shannon naRussell) vanoratidzwa pamwe chete pasi apa.
Sangana naRussell Vabereki, Shannon, naRussell Jr.
Russell Westbrook - Kukura-makore:
Kukurira muHawthorne, guta riri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweLos Angeles County. Russell akapedza uduku hwake aine mukoma wake mumwe chete, Raynard, uye shamwari yake yepamwoyo, Khelcey Barrs, munharaunda yeHawthorne.
Russell, Raynard, naKhelcey vese vane hope dzekuzove mumhanyi vachiri kukura.
Hawthorne ndiko kwakakurira Russell Westbrook.
Russell Westbrook Nhoroondo Yemhuri:
Kune chokwadi chechitatu muhupenyu, kuzvininipisa, kufara, kana kukanganiswa kurerwa. Russell akabva kumhuri yepakati-yemhuri kumashure.
Baba vake, Russell Jr. aive mutambi wenhabvu, anoda nhabvu, basketball, uye kunyangwe tsiva. Panguva mai vake, Shanon, vaive socialite. Pamwe chete mubereki akapa vakomana vavo kurera zvakanaka.
Russell Westbrook Kubva Kwemhuri:
Iyo Westbrook Mhuri, inonyatso kuzivikanwa semhuri yaRussell Westbrook, ndiyo imwe yemhuri dzinozivikanwa dzeNBA. Kunze kwezvo, mhuri yeWestbrook inozivikanwa muAfrica -America. Kujekesa, imba yemhuri yeWestbrook yemhuri kubva kurudzi rwevatema.
Asi, akaberekerwa muAmerica, Russell Westbrook ndeweAmerica nenyika uye ndewedzinza rakasanganiswa.
Russell Westbrook Dzidzo:
Kune rake dzidzo, akaenda kuLeuzinger High Chikoro muLawndale, California. Yaive paLeuzinger Russell akatanga rwendo rwake rwebhasikiti. Rwendo rwebasa raakatanga pachikoro chakakurumbira chesekondari.
Russell akaenda kuLeuzinger High School.
Russell Westbrook Upenyu Hwekutanga Nyaya:
Chekutanga, avo vanoziva Russell vachakuudza kuti aizotamba padanho repamusoro soro. Pakutanga, Russell akatambira chikoro chake chepamusoro semunhu asina kuvhurwa mutsva anonongedza aine saizi shangu gumi nemana. Iye anotamba pamwe chete neshamwari yake Khelcey Barrs.
Russell Ekutanga Basa Roupenyu.
Kuchinja kwakanyanya kukosha kwenyaya yeupenyu hwaRussell hwepamoyo nyaya yaive kufa kweshamwari yake uye waaitamba naye, Khelcey.
Russell naKhelcey vese vakagovana zvakanaka, uye kuenda kwake kwakarova Russell zvakanyanya. Nekuda kweizvozvo, akatanga kudzidzira zvakanyanya, uye munguva pfupi akazove mutambi anodiwa pachikoro chesekondari.
Sangana neanonoka shamwari yaRussel Westbrook, Khelcey Barrs.
Kunyangwe aive mudiki tarisiro, Russell haana kutanga pachikwata chake chevarsity yechikoro kusvika gore rake rejunior.
Asi, sezvingaite, mumwe wevatambi vepamusoro muchikwata cheUCLA akazivisa kunyorwa kweNBA. Izvi zvakagadzira nzvimbo yekuti Russell abatane neUCLA Bruins pachikoro.
Hupenyu hwepamoyo hwaRussell hwepakutanga, achifamba munzira.
Achienderera mberi, Russell kick akatanga basa rake repakoreji paUCLA aine makore 17. Akapinda pamusasa weWestwood wakafaranuka uye akafara kudzidza nezvechimwe chinhu kunze kwemiganhu yeSouth Los Angeles.
Russell muchiito cheUCLA, unogona kuona kuda.
Mugore rake nyowani nyowani, akatamba se backup, mudziviriri, uye mutambi wesimba kubva pabhenji. Chokwadi, mabhaisikopo aBeastbrook akabatsira timu yake kutora zvigaro zvina zvekupedzisira mumwaka miviri.
Mushure mekushamisa kweUCLA basa, Russell akanyorera iyo NBA kunyora. Neraki kwaari, akasarudzwa muchinyorwa cheNBA.
Russell Westbrook Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Kutanga, Seattle SuperSonics (yava kunzi Oklahoma City) yakasarudza Russell 4th yakazara muchirongwa cheNBA cha2008. Akasaina nechikwata pazuva re5th raJuly 2008. Iyi danho yaive kutanga kwenguva nyowani yeiyo nyeredzi yeAmerica.
Russel Westbrook kusaina Seattle Supersonic (Oklahoma City).
KuOklahoma City, muAmerica akaratidza zvishoma nezvetarenda rake. Izvi zvakamuita kuti ave chikamu chemwaka weNBA All-Rookie timu yekutanga uye anoratidzwa panhamba yechina mumutsara.
Russell muchiito ku Oklahoma City.
Asi iyo American basketball nyanzvi yakapotsa ingangoita mwaka wese nekuda kwekukuvara kwemabvi.
Russell anochengeta kurota kwacho kuri kupenyu se iyo isinganzwisisike shasha yakaita basa rakakura mukubatsira timu yake kusvika kumafainari eWestern Conference Tournament.
Beastbrook yakaridzira Kutinhira kwemakore gumi nerimwe, panguva iyo yaakakunda rekodhi hombe yezvakaitika.
Imwe yeakakunda zvikuru paThunder - NBA's MVP yemwaka.
Russell Westbrook Biography - Kubudirira Nhau:
Achienderera mberi nebasa rake, Russell akatengeswa kuHouston Rockets mukutsinhana naChris paul. Iyi nhanho yakamusanganisazve newaaimboshanda naye kuOklahoma City, James Harden.
KuRouston maroketi, akatamba pamwe chete James Harden, vese vakaratidzira kufarira uye kufarira kutamba pamwe chete sevashandi.
Kuonanazve newaimbova mumwe wevadzidzi veThunder, James Harden
Kubatanidzwazve kwevatambi vaviri vakapembererwa basketball yaive kuyedza kukuru kweHouston Rockets.
Muchokwadi, Russell naJames vese vanoratidzira kemisitiri inoshamisa mudare uku vachibatsira maRocket kuita zvinangwa zvavo sechikwata.
Mukupera kwegore ra2020, Russell akatengeswazve kuWashington Wizards, panguva ino, vakamutsinhanisira John Wall.
Nekudaro, Beastbrook akagadzira kutanga kwake kweWizard, achiisa mapoinzi makumi maviri nerimwe, gumi nemana rebound, uye gumi nemashanu kubatsira Nemutambo uyu, akazove mutambi wechitanhatu munhoroondo yeNBA yekunyora katatu-zvakapetwa muchikwata chechikwata.
Kuzviita zvakare kuWashington Wizards.
Zvakare, Russell akamiririrawo timu yenyika yeUnited States kaviri, kuhwina menduru dzegoridhe muFIBA World Championship neOlympics.
Nekukurumidza kumberi kune ino nguva yekusika Bio yaRussian Westbrook, muAmerican akazvivaka semumwe wevatambi vakakurumbira munhoroondo yeNBA.
Kumiririra United States mu-pasi dhizaini.
Vamwe vese, sekutaura kwavo kweHupenyu Hwake Nhoroondo, inhoroondo.
Russell Westbrook Anoda Hupenyu - Musikana, Wife, Vana?:
Takananga kuhupenyu hwerudo hwaRussell Westbrook, mafeni mazhinji anofanira kunge akafunga kana aine musikana kana Akaroora. Muchikamu chino, Tinokutora kubudikidza neruzivo rweyake nyaya yerudo.
Kusangana uye Kudanana Nina Earl:
Kutanga, Russell naNina vakasangana kuUCLA uko vese vari vaviri vakatamba Basketball uye vaive vakabudirira nyeredzi vatambi mumaTimu avo.
Russel naNina vachiita zvinhu zvavo kare kuUCLA.
Munguva iyoyo, vakatanga kufambidzana mu2007 vachiri kunyoresa kuUCLA. Pazasi pane mufananidzo waRussell naNina Earl
Russell kufambidzana naNina Earl.
Russell Westbrook Kuroora naNina Earl:
Mutambi weAmerican basketball akaridzira kune rudo rwehupenyu hwake munaGunyana 3, 2014, ine yakanaka, $ 700,000 mhete. Shiri mbiri dzinodanana dzakasunga banga muna Nyamavhuvhu 29, 2015, mumhemberero yekunze kuThe Beverly Hills Hotel.
Muchato wakajeka waRussell naNina.
Uye zvakare, vatambi ve basketball uye ma celebs, kusanganisira Kevin Durant, Serge Ibaka, nevamwe vazhinji vakafarira chiitiko ichi.
Russell Westbrook Vana naNina Earl:
Vaviri ava vanogamuchira mwana wavo wekutanga Noah Russell Westbrook muna Chivabvu 2017. Mwaka wakatevera munaNovember 2018, veWestbrook vakagamuchira nemufaro vaviri mapatya vasikana Skye, naJordyn Westbrook.
Russell Westbrook Mhuri, mudzimai wake, nevana vake vakanaka.
"Kwandiri, mhuri ndicho chakanyanya kukosha," "Saka zvisinei nekuti chero munhu arikuda chii, kana chimwe chinhu chikaitika kana paine chiri kuitika mumhuri yangu, ndinogara ndichiisa icho pekutanga."
Zvimwe Pamusoro paNina Earl:
Nina Earl Westbrook muAmerican aimbova koreji basketball player akatambira timu yeUKLA Bruins yevakadzi bhasiketi yePac-12 Musangano.
Akapedza kudzidza kuUKLA aine Bachelor of Arts mune zvepfungwa uye mudiki muChirungu. Uye zvakare, Nina anga aine degree raTenzi muClinical Psychology.
Russell Westbrook Biography - Hupenyu Hwechokwadi Chokwadi:
Kusvika pakuziva zvimwe zvakawanda nezve hupenyu hwake chaihwo kubva padare kwaizokubatsira iwe kuti uwane mufananidzo uzere wehunhu hwake.
Kutanga, Russell munhu ane shungu uye akatsunga. Beastbrook mumwe munhu anozotsvaga kudzamara vawana chokwadi.
Iye mutungamiri ane hunyanzvi uye zvakare anoonekera zvakanyanya mukugona. Isu tinobatanidza zvese izvi nehunhu hweScorpio Zodiac.
Kufanana nevatambi vazhinji veNBA, isu tinoziva Russell nebasa rake rerupo kuburikidza neKwake Nei? Nheyo. Iyo poindi gadhi inoronga zviitiko zvakasiyana kuti zvidzosere kunharaunda.
Izvi zviitiko zvinosanganisira kupa vagari veOKC neLA mukana wekutenda, kushandisa nguva yakanaka nevana vadiki vanoshaya, uye kupa shangu, mabhegi, t-shirts kutumidza mashoma.
Russell nemhuri yake vachidzorera kunzanga kuburikidza neiyo yake Kwete Nheyo.
Russell Westbrook Net yakakosha:
Kubva muna 2021, mari yaRussell Westbrook inokosha $ 170 miriyoni. Iyi yakawanda mari inouya kubva kumihoro yake uye endorsement inobata nemhando yepamusoro seNike, PepsiCo, uye Samsung. Mari yaanowana kubva kunotsigirwa inopa kune anosvika madhora gumi nemasere emubhadharo wake.
Russell Westbrook Mararamiro:
Pamwe chete nehunhu hwake mukati uye kunze kwedare, Russell Westbrook anotakura pamwe naye mushe mushe mushe wefashoni. Kubatana kwaRussel neBarneys Store, chitoro chepamusoro muNew York City, kwave nezvibereko.
Russell Westbrook Hupenyu Hwemhuri:
Kune wekuAmerica, rudo rwemhuri yake nderimwe remaropafadzo makuru ehupenyu. Hapana huwandu hwemabhasikiti mari inogona kutora nzvimbo yenguva iyo Russell anoshandisa nemhuri yake yenyukireya. Muchikamu chino, isu tinokuudza zvakawanda nezvevabereki vake, mukoma, uye hama.
About Russell Westbrook Baba
Russell Jr Westbrook ndibaba vaBeastbrook. Ivo vanotsigira baba vevaviri nyika yeAmerica yaimbove mutambo wenhabvu.
Anoda nhabvu, basketball, uye kunyangwe tsiva. Russell Jr ndiye mumwe wevanonyanya kukosha murwendo rwakabudirira rwemwanakomana wake waanoda.
Sangana naRussell Westbrook Baba, Russell Jr.
Nezve Russell Westbrook Amai:
Shannon ndiamai vaRussell. Kufanana nemurume wake, Russell, Shannon isocialite uyo kunyangwe aine nguva yakawanda yekubatikana anogara achimutsigira Russell.
Pamusoro pazvose, Shannon anodada uye anofara basa rake rese rekuunza iyo superstar raisambove pasina.
Sangana naRussell Westbrook Mum, Shannon.
Nezve Russell Westbrook Hama:
Russell haana hanzvadzi asi munin'ina anonzi Raynard. Ivo vakoma vese vakakura pamwe chete, asi, kusiyana naRussell, Raynard anotevera chikamu chekuve nhabvu.
Uye zvakare, Raynard akapedza kudzidza kuYunivhesiti yeCentral Oklahoma. Saizvozvo, iye parizvino ari Chief Zvemukati Officer paRussell Westbrook Enterprises.
Sangana nemunin'ina waRussell Westbrook, Raynard.
Nezve Russell Westbrook Relative:
Kure kubva kumhuri yepedyo yaRussell, tinokuunzira ruzivo nezvehama dzake. Sekuru vababa vake ndiRussell Westbrook Sr., asi ambuya vake vababa vake vasingazivikanwe.
Uye zvakare, sekuru vake amai namai havazivikanwewo panguva yekunyora.
Uye zvakare, babamunini, babamunini, uye babamunini havasati vachizikanwa mukuonekwa kwenyaya yehucheche uye nhoroondo yake. Izvozvowo zvinoyambuka bhodhi revana babamunini vake.
Russell Westbrook Untold Chokwadi:
Kuputira iyo nyaya yehucheche uye Biography chokwadi cheBeastbrook, isu tinoshandisa chikamu ichi kukuudza zvimwe zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi iwe zvaunoda nezve basketball shasha, Russell Westbrook.
Chokwadi # 1 - Anopfeka Rubber Bracelet Ine KB3 Yakanyorwa Pairi:
Russell akapfekedza bhandi rerabha rakanyorwa paK KB3. KB3 zvakare dzimwe nguva inoonekwa pane shangu dzake.
Uku ndiko kutaura nezveshamwari yake yekusekondari uye waaishanda naye Khelcey Barrs, uyo akashaya muna 2004 aine makore gumi nematanhatu kubva mukusaziva kwemoyo.
Beastbrook akapfeka bhandi rerabha ine KB3 yakanyorwa pairi semutero kushamwari yake, Khelcey.
Pazasi peiyo vhidhiyo inotsanangura chikonzero chiri kumashure kwaRussell Westbrook bracelet.
Chokwadi # 2 - Katatu-Ruviri Mukudzokera Kumwaka Wekumashure NBA Rekodhi:
Kuenzanisira katatu-zvakapetwa mumwaka wese chiitiko chakakura kune chero mutambi weNBA.
Asi Russell akaita chimwe chinhu chinotonyanya kufadza uye akaenzana zvakapetwa katatu pamusoro pemwaka wese kwemakore maviri akatwasuka.
Kujekesa, ndiye chete mutambi akaita izvi, uye icho chinyorwa chingangogara nekusingaperi.
Katatu-Ruviri Kudzoka Kumashure Mwaka NBA Rekodhi.
Chokwadi # 3 - Yekupedzisira Sonic:
Russell aive wekupedzisira kunyorwa sarudzo yeSeattle Supersonics. Muchokwadi, aive wechina chese sarudzo mu2008 Draft. Kujekesa, Russell ndiye mutambi wekupedzisira kunyoreswa neSupersonics iyo franchise isati yatamisirwa kuOklahoma City.
Chiitiko chekusaina Seattle Supersonic.
Chokwadi # 4 - Iye waanofarira mutambi achikura:
Akazvarwa muCalifornia, mutambi waRussian ainakidzwa kuona achiri kukura aive Magic Johnson. Iyo poindi yevarindi inonzi seinonyanya kukosha poindi nguva dzese.
Kunyangwe zvavo zvitaera zvisingaenderane. Asi, kungofanana nechero ipi yemazuva ano murindi wepfungwa, sarudzo yaRussel haina kusiyana.
Sangana naRussell naiye waanofarira mutambi achikura, Magic Johnson.
Russell Westbrook Biography Pfupiso:
Zita rizere Russell Westbrook III
Bhavhdhe 21 zuva raNovember 1988
vabereki Russell Jr. Westbrook naShannon Horton.
Children Noah, Jordyn, uye Skye Westbrook
dzidzo Leuzinger High Chikoro, Lawndale, California.
Inokosha kukosha $ 170 Million
urefu 1.91 M
uremu 90.72 makirogiramu
Profession Basketball mutambi
Kupfupisa, Russell, pamwe na LeBron James, ndiye chete mutambi anorekodha katatu-kaviri kurwisa timu yese yeNBA.
Uye zvakare, Russell anorapa avhareji yakapetwa katatu, sezvo aive nemakumi maviri neshanu nemakumi matatu nematatu nekatatu mumwaka miviri, zvichiteerana. Saizvozvo, iye ane akanyanya kudzokororwa muNBA nhoroondo pakati pe25ft 34in magadhi kana mapfupi.
Gore mushure mekutengeswa kumaRocket, Russell Westbrook anotora kurasikirwa kukuru pamusha weOklahoma. Shasha yeNBA akatengesa nzvimbo yake pedyo neOklahoma City nemadhora miriyoni 1.03, inoda kusvika hafu yemamiriyoni emadhora 1.945 yaakabhadhara payakatengwa kare.
Kutenda nekuverenga iyo Biography yaRussell Westbrook. Kunyanya zvakadaro, ndinokutendai nekutenda mune zvatiri uye nezvatinoita.
At Childhood Biography, isu tinokupa iwe nyaya uye biography chokwadi nekurongeka uye kurongeka. Ita zvakanaka kutaura nesu kana kusiya meseji pazasi kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka. Kuti uwane pfupiso yeRussian Westbrook's Biography, shandisa iyi Wiki Tafura.